Multi-Stochastic - faa&#39;iido dhakhso leh oo ku saabsan tilmaamayaasha caadiga ah | vfxAlert official blog
«Multi-Stochastic» faa&#39;iido dhakhso leh oo ku saabsan tilmaamayaasha caadiga ah
Waxaan soo bandhigeynaa istiraatiijiyad kale oo ku saabsan sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah iyadoo la adeegsanayo tilmaamayaasha falanqaynta farsamada caadiga ah. Waxay ku keenaysaa faa iidooyin deggan xawilaadaha muddada-gaaban iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxaana heli kara xitaa kuwa bilowga ah.
Celceliska dhaqaaqa E xponentials (EMA) ee leh 14 . Tilmaamayaasha isbeddelka ee aan ku go'aansano barta furitaanka ikhtiyaarka. Istaraatiijiyadda looma jeedin ganacsiga inta lagu jiro xilliyada guryaha.
Laba Stochastic oo leh 5 (soon) iyo 30 (gaabis ah) - oscillator ayaa qiimeyn doona isku dheelitirka hadda ee u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha: saadaashu waxay ka sarreysaa heerka 80 - dhammaadka kor u kaca (xad dhaaf), ka hooseeya 20 - dhammaadka hoos u dhaca (xad dhaaf)
Ikhtiyaar CALL. Qiimuhu wuxuu ka jabayaa hoos udhaafka Dhaqdhaqaaqa hoose. Labadaba Stochastic waxaa lagu hagaajiyaa ama laga baxaa aagga kormeerka
Dooro door. Xaaladaha soo noqnoqda: ka soo dillaac Celceliska Dhaqdhaqaaqa Sare ee ugu hooseeya, Stochastic waxay ka baxsan tahay aagga xad dhaafka ah waxayna u socotaa kor.
Istaraatiijiyadda Intraday « Multi-Stochastic » waxay u taagan tahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo ah muxaafid xagjir ah oo loogu talagalay ganacsiga suuqa xasilloon. Halbeegyada qalabka ganacsiga waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa in calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ugu faa'iido badan ay ku jiri doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!
Ganacsi otomaatig ah marka loo eego istiraatiijiyadda « Multi-Stochastic » waa suurtagal: dhowr nooc oo ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxaa laga heli karaa shabakadda, laakiin, sida nidaam kasta oo wax lagu nadiifiyo, way ka wanaagsan tahay in gacan looga ganacsado iyadoo la adeegsanayo qorshahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u hagaajiso nidaamka isbeddelada suuqyada, iyo hantida badan ee istiraatiijiyaddu waxay kuu dammaanad qaadaysaa faa'iido deggan maalin kasta.